Shirkada Diyaaradaha Boeing Oo Khaladkeeda Qiratay Ka Dib Bur Burkii Diyaaradii Itoobiya |
Shirkada Diyaaradaha Boeing Oo Khaladkeeda Qiratay Ka Dib Bur Burkii Diyaaradii Itoobiya
Dennis Muilenburg oo ah Madaxa shirkadda diyaaradaha samaysa ee Boeing ayaa qiray in qaab ka mid ah hannaanka ay diyaaraddu u shaqayso ay gacan ka gaysatay labadii diyaaradood ee burburay shantii bilood ee la soo dhaafay, diyaaradahaas ayuu noocoodu ahaa 737 Max.
Balse wuxuu sheegay in diyaaradda 737 Max ay ka mid noqon doonto diyaaradaha ugu ammaan badan marka ay dib u hawlgasho ee la cilad bixiyo habka ay ku shaqayso, dib u eegisna lagu sameeyo hagaha duuliyeyaasha.
Wasiirka gaadiidka ee Itoobiya ayaa sheegtay in hanaanka diyaaradda ee 737 Max uu horseeday in ay af af u hoobato, shaqaalaha oo raacaya nidaamka xaaladda degdegga ah ee diyaaraddana ay xakamayn waayeen, waxay sidaas ka sheegtay shir jaraa’id oo ay qabatay ka dib markii ay soo baxday warbixintii hordhaca ahayd ee baaritaankii lagu hayay burburka diyaaradda.
Duulaamaadka ET302 ayaa burburtay waxyar ka dib markii ay ka duushay magaalada Addis Ababa, waxaana ku dhintay 157 ruux ee saarnaa.
Bishii Oktoobar ee sannadkii horana diyaarad ay lahayd shirkadda Lion Air oo duulimaad lambarkeedu ahaa JT 610 ayaa ku burburtay bad u dhaw Indonesia, waxaana ku dhintay dhammaan 189 ruux ee saarnaa.